Varimbazaha karaoty | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Varimbazaha karaoty
Ny mahasoa sy mampidi-doza ny lakozia ao Peking
Ny karajin'i Beijing dia fantatra amin'ny rehetra ho fanampim-panafody ho an'ny salady, ny fitsangatsanganana ary ny sakafo haingana. Tonga tany aminay avy any amin'ny Farany Atsinanana izy, naka ny sakafo sy ny sakafo. Tia am-pitiavana io karazana voanio io noho ny hoe azo ampiasaina ho salady, ary toy ny laisoa tsotra. Fantatrao ve? Ny Beijing na ny sinoa sinoa dia avy amin'ny voalazan'ny ravinala ao amin'ny fianakaviana karaoke.
Vitan'ny baomba, na ny tombony ho an'ny kohlrabi
Any Eoropa, i Kohlrabi dia tiana sy hajaina - tsy dia mendri-piderana amin'ny fikarakarany izy ary mifanaraka amin'ny fepetra ara-toetr'andro. Ny haben'ny kalitao dia mampitombo ny karaoty fotsy, ary ny toetra ilaina dia tsy ambany noho ny broccoli. Inona koa ny kohlrabi mahavariana, inona no soa azo avy aminy ary tsy hanimba ny fampiasany?
Kohlrabi: karazany varimbazaha
Kohlrabi dia legioma izay tena sarobidy ho an'ny asidra ascorbic. Eat a stelplod, izay toa marefo amin'ny ravina, mitombo amin'ny tany ary tsy mifandray amin'ny tany. Ny tselatra dia maitso maitso na volomparasy, boribory na ravina boribory, miankina amin'ny karazana karaoty.
Cabbage Kale: varietro of varieties
Nidera ny legioma antsoina hoe Kale ny kary ny voankazo, ny karazany dia malaza any ivelany ary matetika antsoina hoe "wild" na "curly", "braungol" na "grunkol". Fitaovan'ny Leaf Brassica oleracea var. Sabellica dia anisan'ny zaridaina zaridaina. Raha ampitahaina amin'ny tsimok'aretin'i Bruxelles sy brokolika, dia tsy hita matetika ao amin'ny sakafo fisakafoana ny vokatra ateraky ny mpamboly, fa isan-taona dia miha-malaza kokoa ny mponina any amin'ny lohataona amin'ny lohataona, indrindra noho ny fanamafisana ny hafanana (hatramin'ny -15 ° C) sy ny toetra ilaina amin'izany.
Vavy fotsy: ny karazana tsara indrindra ahafahana mitombo amin'ny famaritana sy ny sary
Ny karaoty fotsy dia zavamaniry isan-taona miaraka aminà karazan-tsakafo, vitamina sy trace. Ny karazana voanio fotsy dia miavaka amin'ny iray hafa amin'ny vanim-potoana mamy, ny haben'ny legioma, manify, manify. Rehefa mifidy masomboly dia ilaina ny mandray ny toetran'ny toetr'andro any amin'ny faritra misy anao, ny faritra geografika, ny famantarana ny mari-pana, ny karazana ary ny fambolena ny tany.
Karazana menaka mena ho an'ny latabatrao
Ny karaoty mainty dia ambany noho ny alahelon'ny loko fotsy. Na dia eo aza ny fahamendrehany (ny habetsahan'ny vitamina sy mineraly ao aminy dia ambony noho ny fotsy hoditra), ny fahantrana manokana amin'ny tsiro dia mametra ny fihenany. Na izany aza, amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia misy karazany maro ny voanio mena, tsy misy io tsy fahombiazana io.
Ny momba ny alika agressora
Ny "Aggressor" karaoty - varotra isan-karazany, manamarika ny fanoherana ny toetr'andro, ny tsirony tsara ary ny vokatra tsara. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome fanazavana momba an'io zavamaniry io ianao, hilaza aminao ny tombony sy ny tsy fahampian-tsainy, ary diniho koa ireo fitsipika momba ny fambolena sy ny fikarakarana. Famaritana ny karazana karazana "Aggressor" Variety "Aggressor" dia nentina tamin'ny 2003 tany amin'ny orinasa mpamboly holatra holandey.
Ahoana ny fisafidianana ny voan-kafe: 12 tsara indrindra
Rehefa mamafy voanio katsaka amin'ny fambolena zana-ketsa isika, dia manantena isika fa ny vokatra ho avy dia ho be sy ho tsara kalitao, fa ny mifanohitra amin'izany dia mety hitranga. Ny tranga matetika dia tsy amin'ny kalitaon'ny voa, fa amin'ny tsy fanarahan-dàlana amin'ny famolavolana lohahevitra mifantoka amin'ny fitomboan'ny fepetra sy ny toetran'ny vary. Noho izany, androany dia hijery ny fomba hisafidianana ny voan-kafe isika mba hahazoana vokatra tadiavina.
Ny tena manan-danja indrindra amin'ny fitomboan'ny karaoty "Rinda"
Rarika fotsy "Rinda F1" - malaza be ankehitriny. Ny fikarakarana fikarakarana, ny fampifanarahana amin'ny toe-javatra samihafa, ny tsy fahampian'ny aretina sy ny bibikely, ny fambolena goavana indrindra amin'ny vokatra tsara indrindra dia mahatonga ny fambolena voajanahary tsy manintona ny toeram-ponenana, fa amin'ny antony ara-barotra ihany koa.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Varimbazaha karaoty